ပဟေlesိများ Em Emulator.online မှ ဝင်၍ ပျော်မွေ့ပါ
ပဟေဠိ။ ဒီလှပသောဂိမ်းကိုနားလည်ရန်သင်သိထားသင့်သမျှကိုအောက်တွင်ပြပါမည်။ ယင်း၏အင်္ဂလိပ်အဓိပ္ပာယ်၊ ရင်းမြစ်၊ အကျိုးကျေးဇူးများ၊ ပဟေlesိအမျိုးအစားများနှင့်၎င်းကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းဗျူဟာများမှဖြစ်သည်။
ပဟေlesိ - အဆင့်တစ်ဆင့်မည်သို့ကစားရမည်နည်း
လုပ်ရန် စကားတာ အွန်လိုင်းအခမဲ့, သင်ရုံရန်ရှိသည် ဤညွှန်ကြားချက်များကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လိုက်နာပါ:
ခြေလှမ်း 1။ သင်နှစ်သက်သောဘရောက်ဇာကိုဖွင့ ်၍ ဂိမ်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပါ Emulator.online
ခြေလှမ်း 2။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကို ၀ င်သည်နှင့်ဂိမ်းကိုဖန်သားပြင်တွင်ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။ သင်သာရန်ရှိသည် play ကိုနှိပ်ပါ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပဟေchoosingိကိုသင်စတင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ သင်အနှစ်သက်ဆုံးပုံကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ နှင့်ရွေးချယ်ပြီးနောက်ပဟေuzzleိရှိမည့်အပိုင်းအရေအတွက်ကိုလည်းသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
3 အဆင့်။ ဒီမှာအသုံးဝင်တဲ့ခလုတ်အချို့ရှိတယ်။ လုပ်နိုင်အသံထည့်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပါ"ခလုတ်ကိုပေးပါ"ကစား"ပြီးတော့ကစားနိုင်ရင်မင်းလုပ်နိုင်တယ်"ခေတ္တရပ်နားသည်"နှင့်"ပြန်လည်စတင်ပါအချိန်မရွေး
4 အဆင့်။ အပိုင်းအစအားလုံးကိုအတူတကွစုစည်းပါ၊ သင်ရွေးချယ်သောရုပ်ပုံဖန်တီးလိုက်သည်။
5 အဆင့်။ ဂိမ်းပြီးပါကကိုနှိပ်ပါ "ပြန်စတင်သည်" အခြားပဟေlesိလုပ်ဖို့။
Un စကားတာ, ဒါဟာဖြစ်ပါသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သောများစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအပိုင်းအစများဖြင့်ဖန်တီးထားသောဂိမ်း၊ ယေဘုယျအားဖြင့်ပုံ၊ မြေပုံသို့မဟုတ်ဓါတ်ပုံများ။ ဒါဟာအလွန်ဟောင်းနွမ်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်အကောင်းဆုံးဝါသနာတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ထို့အပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအထောက်အကူပြုသည်။
သို့သော်ပဟေuzzleိကိုမကြာသေးမီကတီထွင်ခဲ့သည်ဟုထင်သူမည်သူမဆိုမှားသည်။ ငါပြောသကဲ့သို့သူသည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးသူ၏တီထွင်မှုသည်အခြားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်ဖြစ်သည်။
ပဟေappearedိပေါ်လာသည့်အခါသမိုင်းပညာရှင်များအနေဖြင့်မပြောရသေးသော်လည်း၎င်း၏ဇာစ်မြစ်နှင့် ပတ်သက်၍ သီအိုရီများရှိသည်။
အများဆုံးလက်ခံသူများထဲမှတစ်ခုမှာအင်္ဂလိပ်ကာတွန်းဆရာဖြစ်သည်၊ John Spilsbury, ဂိမ်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ သူ၏ကျောင်းသားများသည်ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာလေ့လာရန်အတွက် ၁၇၆၀ တွင်ဂျွန်သည်ကမ္ဘာ့အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အပိုင်းအစများကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ အတူတူသူတို့ကမ္ဘာ၏မြေပုံကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ သစ်သားပျဉ်ပြားများ၊ Spilsbury သူ၏ကျောင်းသားများကိုပျော်စရာနှင့်သင်ယူမှုကိုပေးခဲ့သည်။
ဒါပေမဲ့ အချို့ကဤပဟေpိကိုတရုတ်တီထွင်သည်ဟုဆိုကြသည်. Tangram ၎င်းသည်တရုတ်နိုင်ငံ၏ရှေးဟောင်းအရုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အပိုင်းပိုင်း (၇) ခုသာရှိသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်ရုပ်ပုံများစွာပေါ်ပေါက်စေသည်။ သို့သျောလညျး, ငါတို့ရန်အသုံးပြုသောနက်နဲနှင့်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားသည်။
Spilsbury ကိုတီထွင်ပြီးနောက်ပဟေuzzleိသည်အလွန်လူကြိုက်များခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသောကြောင့်သူတို့သည်အလွန်စျေးကြီးခဲ့ကြသည်။ သာဖြစ်ခဲ့သည် စက်မှုတော်လှန်ရေး (၁၇၆၀-၁၈၂၀ / ၁၈၄၀) တွင်ပဟေpိသည်ဈေးချိုလာသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တော်လှန်ရေး၏နည်းပညာတိုးတက်မှု သူတို့ကကစားစရာကိုပိုမြန်ပြီးစျေးနှုန်းချိုသာအောင်လုပ်ဖို့လိုတဲ့ကိရိယာတွေကိုပေးတယ်။
မဟာစီးပွားပျက်ကပ် (၁၉၂၉) အတွင်းအရုပ်သည်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ခဲ့သည်။ တစ်နာရီလျှင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပဟေrentalိအငှားကားပင်ရှိသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကစားစရာနှင့်ကစားသောအခါလူတို့သည်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ကျေနပ်မှုရရန်ကြိုးစားသည်။
ပဟေိစကားလုံး (စပိန်စကားဖြင့်ပဟေ.ိ) လူတိုင်းသိပြီးအသုံးပြုကြသည်။ ၎င်း၏ဇာစ်မြစ်မှာအင်္ဂလိပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အင်္ဂလိပ်စာရင်းမြစ်မှာလက်တင်၊ လက်တင်ကြိယာမှဖြစ်သည် ငါထားမယ် (ဆိုလိုသည် ဝတ်ပါ).
ထုပ်ပိုးခြင်းအပေါ်အသက်အရွယ်အရိပ်အယောင်သည်အထောက်အကူပြုသော်လည်းသီးခြားသတ်မှတ်ချက်အဖြစ်အသုံးမပြုသင့်ပါ။ ဤဂိမ်းနှင့်သင်၏ကလေး၏ရင်းနှီးမှုကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ အကယ်၍ ကလေးတွင်ယခင်အတွေ့အကြုံမရှိလျှင်အပိုင်းအနည်းငယ်နည်းသောမော်ဒယ်များကိုသူနှင့်အကျွမ်းတ ၀ င်မထားပါနှင့်။
mounting အတွက်သင့်တော်သောပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသည်
ပဟေpurchasedိဝယ်ပြီးသည်နှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် စည်းဝေးပွဲများအတွက်သင့်လျော်သော configuration ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်, လူများစီးဆင်းမှုမရှိသည့်နေရာသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေသင့်သည်။
ဤလုပ်ဆောင်မှုသည်အာရုံစူးစိုက်မှုများစွာလိုအပ်ပြီးအလွန်အကျွံဆူညံသံသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုက ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သည်ကိုသတိရပါ။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ အခန်း၏ထောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်စားပွဲကြီးတစ်ခုရှိသည့်အခြားအခန်းတစ်ခန်းကိုရွေးချယ်သင့်သည်။
လမ်းညွှန်တစ်ခုအားရည်ညွှန်းချက်အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကိုလျစ်လျူရှု။ မရသည့်အကြံပြုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်ကစားစရာကိုယ်နှိုက်ကပုံရိပ်ကိုပြန်လည်စုစည်းပေးသည်။
ဒီမော်ဒယ်ကိုစည်းဝေးပွဲလုပ်ငန်းစဉ်မှာကူညီနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလက်လှမ်းမီအောင်ထားပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့မှာမေးခွန်းတွေရှိရင်အဲဒါကိုရည်ညွှန်းနိုင်တယ်။ ထိုကိစ္စတွင်အသေးစိတ်အာရုံစိုက်မှုသည်ခြားနားမှုနှင့်မြန်နှုန်းပြီးဆုံးစေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးအစွန်အဖျားသည်အကောင်းဆုံးတပ်ဆင်နည်းကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဒီသဘောနဲ့ ကထောင့်နှင့်အတူစတင်ရန်အကြံပြုသည်အဘယ်သူ၏အပိုင်းပိုင်းဖြောင့်နှစ်ဖက်ရှိသည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်သည်ပုံ၏နောက်ဆုံးအရွယ်အစားကိုခန့်မှန်းနိုင်သည်။
အပိုင်းပိုင်းအရေအတွက်ကအရမ်းကြီးမားတယ်ဆိုရင်, ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးသည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည် 40 အပိုင်းပိုင်း အထူးသဖြင့်ကလေးများပါ ၀ င်လျှင်၊ သူတို့တစ်ခုချင်းစီသည်သေးငယ်သောအပိုင်းအစများအတွက်တာဝန်ယူနိုင်ပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ် ဦး က၎င်းတို့အားအတူတကွစုစည်းရန်တာ ၀ န်ယူသည်။
အဆုံးနီးခါနီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ထပ်လမ်းညွှန်တစ်ခုပေးသည်။ အပိုင်းအစများအကြားမတူကွဲပြားမှုများကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခြင်းသည်မလိုအပ်သောသဘောထားဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ဖြည့်စွက်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းသင်သိသောအခါ၎င်းတို့ကိုမပျက်စီးစေရန်အခြားနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပါ။
သငျသညျဆက်ဆက်ကြားဖူးတယ် ပဟေbenefitsိအကြိုးခံစားခှငျ့။ ဒီဂိမ်းအမျိုးအစားက ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့နည်းလမ်းကစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးအသက်အရွယ်မတူသူများစွာအတွက်မရေမတွက်နိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိစေသည်။
သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းများကိုစုစည်းပြီးအဆုံးမှာ panel ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ဖြစ်ခြင်းတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သိမြင်မှုလေ့ကျင့်ခန်း သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ လူကြီးများ၊ လူငယ်များနှင့်ကလေးများအထူးသဖြင့်ပညာရေးအဆင့်တွင်ရှိသူများ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပဟေpိသည်မှတ်ဉာဏ်အတွက်ကောင်းသည်။ ကျောင်းတွင်၊ အထူးသဖြင့်ကလေးဘဝပညာရေးတွင်အသုံးပြုသောအခါ၎င်းသည်သင်ယူမှုကိုများစွာအထောက်အကူပြုသည်။ ကျောင်းတွင်ဤကိရိယာကိုအသုံးပြုခြင်း၏အားသာချက်များ၊ ယင်း၏စည်းမျဉ်းများသို့မဟုတ်ပဟေorိတစ်ခုအားစုစည်းလိုသောသူများအတွက်မည်သည့်အားသာချက်များကိုသင်ပိုမိုသိလိုပါသလဲ။ ဆက်ဖတ်ပါ
၁- ပဟေPuzzleိသည် ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်
ပဟေofိ၏ပထမ ဦး ဆုံးအဓိကပါဝင်မှုမှာဉာဏ်ရည်အဆင့်တွင်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် သိမြင်မှုစွမ်းရည်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဒါဟာကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဤလုပ်ဆောင်မှုသည်ကလေး၏ပြသနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်အပေါ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတိုးလာသည် နှင့်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်အောင်။ နံပါတ်များ၊ အရောင်များ၊ ပုံစံများ၊ မြေပုံများ၊ အာကာသ၊ အသွားအလာနှင့်အခြားသောအသိပညာဗဟုသုတများစွာကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။
ပဟေusingိအသုံးပြုခြင်း၏နောက်ထပ်သက်ဆိုင်သည့်အချက်မှာ၎င်းသည်ကောင်းသည် မှတ်ဉာဏ် ။ ဤအလှူငွေသည်မေ့လျော့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပြforနာများရှိသူများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ထို့ကြောင့်ဤအရာသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်မှန်ကန်သောအပိုင်းများကိုရှာဖွေခြင်းသည်လူအားပုံစံများနှင့်သူတို့၏ဖြစ်နိုင်သောအတွဲများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုစုဆောင်းစေသည်။ မှတ်ဉာဏ်ချို့တဲ့သောသက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ဤလှုပ်ရှားမှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါသလား။
ဒါကြောင့်ဒီပရိသတ်ကိုရည်ရွယ်တဲ့ပဟေpိတစ်ခုကလေ့ရှိတယ် ကလေးဘဝကတည်းကပင်မော်တာညှိနှိုင်းမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည် ။ သေးငယ်သောအပိုင်းအစတစ်ခုကိုအခြားတစ်ခုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းသည်လက်များ၊ မျက်လုံးများနှင့်လက်များလှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်အလွန်ကောင်းသောမက်လုံးဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ ပဟေtheိသည် ပို၍ ကြီးသော၊ အရောင်အသွေးစုံသောအပိုင်းအစများနှင့်အလွန်ရိုးရှင်းသောထည့်သွင်းခြင်းတို့ဖြင့်ကလေး၏တိကျသောအသက်အရွယ်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သင့်သည်။ ညှိနှိုင်းမှုအခက်အခဲရှိသောလူကြီးများသို့မဟုတ်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။
နှင့်ဤရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ရန် ပဟေuzzleိသည်လူမှုရေးအတွက်အလွန်ကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် ။ ကစားစဉ်အတွင်းကလေးများသည်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သည်၊ ပြိုင်ဆိုင်နိုင်သည်၊ အောင်မြင်နိုင်သည်။
ဤဂိမ်းသည်ကျောင်းသူ / သားများ၏သဘောထားကိုလည်းအားပေးသည်။ အတွေးအခေါ်များကိုလေ့လာခြင်း၊ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်စုစည်းခြင်း၏စွမ်းရည်များသည်ကလေးတစ် ဦး ချင်းစီ၏ပညာရေးအတွက်အထောက်အကူပြုမည့်အရာများဖြစ်သည် .
စျေးကွက်တွင်, ပဟေseveralိအများအပြားဗားရှင်းရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်ဖြောင့်ဖြောင့်သောမျက်နှာပြင်တစ်ခုနှင့်ရှုထောင့်တစ်ခုတည်း၌တပ်ဆင်ထားသည့်အရာများသာမကအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်ကိုသတိရသင့်သည်။
အများအားဖြင့်ပဟေlesိအမျိုးအစားများမှာ Bedlam တုံး, မှော်တုံး, sum ပေါင်းတုံး, Pentaminos နှင့် Tangram။ ဤပဟေlesိပုံစံများအကြောင်းအသေးစိတ်များကိုရှာဖွေပါ။
ဒီဂိမ်းထဲမှာပါဝင်သည် ပြီးပြည့်စုံသော cube ဖွဲ့စည်းရန် 13 ကိုအပိုင်းပိုင်း။၎င်းသည် Bruce Bedlam မှဖန်တီးခဲ့သောပဟေaိဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း Cube ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအပိုင်းပိုင်း ၁၃ ခုရှိသည်။ အကြံဥာဏ်ကတော့4x4x4cube တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတီထွင်ဖန်တီးမှုဖြစ်ဖို့ပါ။ စိန်ခေါ်မှုကတော့အဲဒါကိုလုပ်ဖို့ ၁၉,၀၀၀ ကျော်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖို့ပါ။
အဆိုပါမှော်တုံးငါတို့ဟောင်းအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏တရားဝင်အမည်မှာ Rubik's Cube ဖြစ်ပြီးဟန်ဂေရီမှတီထွင်သူ Ern Hungary Rubik ကိုဂုဏ်ပြုသောနာမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ၁၉၇၄ တွင်တီထွင်ခဲ့ပြီးကြီးမားသောမွေးဖွားခြင်းအားဖြင့် Game of the Year ဆုကိုရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေကဒီပဟေofိရဲ့အထွတ်အထိပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
သူတို့ကအတူတကွတစ်တုံးဖွဲ့စည်းသော polyethylene Cube ဖြစ်ကြသည်။
ဒါကနောက်ထပ် Cube ပုံစံပဟေisိတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Piet Hein မှတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကွမ်တန်မက်ကန်းနစ်စာသင်ခန်းတက်ပြီးနောက်၎င်းကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ဒီဂိမ်းမှာ polyethylene Cube ခုနစ်ခုကိုသုံးထားပြီးအတူတူ ၃ x ၃ x ၃ Cube ကိုဖွဲ့စည်းသည်။ ဒီအပိုင်းတွေကစုစုပေါင်းပုံစံ ၂၄၀ ကျော်ပါ။
ဒီပဟေhasိရှိတယ် ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့စီစဉ်ပေးငါးရင်ပြင်။ စုစုပေါင်းPentaminóအမျိုးအစား ၁၂ မျိုးရှိသည်။ ဤပဟေuzzleိသည် Tetris သို့မဟုတ် Rampart ကွန်ပျူတာဂိမ်းများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ဒီဂိမ်းကကျော်ကြားတဲ့ Tetris ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။
El .ရာဝတီ ၎င်းတွင်အပိုင်းအစ ၇ ခုသာရှိပြီးကိန်းဂဏန်းပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
ဒါကဖြစ်ပါသည် ပဟေorိသို့မဟုတ် Jigsaw ပိုမိုစီးပွားဖြစ်ပုံစံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုရိုးရာ။ သူဟာတရုတ်ပြည်မှာခုနစ်ပိုင်းခွဲပြီးမွေးဖွားခဲ့ပြီးသူတို့ဟာအတူတကွကိန်းဂဏန်းများစွာကိုဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ စွယ်စုံကျမ်းတစ်ခုကဖော်ပြချက်အရ ၅,၀၀၀ ကျော်ကိန်းဂဏန်းများကိုစုဆောင်းနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်ယနေ့လူကြိုက်များသောအတိုင်းအတာဖြင့်ပဟေgamesိဂိမ်းများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်မှာသေချာသည်။
El အကြီးမားဆုံးပဟေ.ိ အမည်ရှိ "Keith Haring: နှစ်ဆနောက်ကြောင်းပြန်သူကအပိုင်းအစ ၃၂,၂၅၆ ရှိပြီးအလေးချိန်အားဖြင့် ၅.၄၄ မီလီမီတာ ၁.၉၂ မီတာရှိသည်။
၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင်ပီရူးတွင် Movimento Revolucionario Tupac Amaru ပြောက်ကျားအဖွဲ့သည်ဂျပန်သံအမတ်၏နေအိမ်သို့ကျူးကျော်ခဲ့သည်။ ဓားစာခံ ၇၂ ယောက်ကျော်နှင့်ညှိနှိုင်းမှုကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးခဲ့သည်။ 2,000 အပိုင်းအစပဟေuzzleိ။ ဒါကဓားစာခံတွေဟာဝါသနာရှိနိုင်တာကြောင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွေကြောင့်စိတ်မထိန်းနိုင်တာဖြစ်တယ်။
1933 ခုနှစ်တွင်ပဟေlesိ သူတို့ကတ်ထူပြားဖြစ်လာတယ်။ အားလုံးနီးပါးကစျေးနှုန်းချိုသာအောင်လုပ်တယ်၊ တစ်ပတ်ကို ၁၀ သန်းလောက်ရောင်းရတယ်။
အကောင်းဆုံးကြမ်းတမ်းတဲ့ဖုန်းများ၊ မပျက်စီးနိုင်တဲ့ဖုန်းများ - ဘယ်ဟာကိုရွေးရမလဲ
Google Lens ကို Android နဲ့ iPhone / iPad တွေမှာဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ
OLED or QLED - တီဗီအသစ်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းပညာကဘာလဲ။
Office Print Server တစ်ခုဖန်တီးနည်း
ဂျပန်ထောက်လှမ်းရေးစမ်းသပ်မှုကို ၁၅ မိနစ်အတွင်းအပြီးသတ်မည်ဖြစ်သည်
ပိုမိုမြန်ဆန်သော virtual machine များအတွက် BIOS တွင် Virtualization ကိုမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း
PC သို့မဟုတ် PS5 / Xbox စီးရီးများကစားရန်ပိုကောင်းပါသလား။
Windows0တွင် BSOD အမှား (00000xc10e) ကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း